1- Fanomezana vatsim-pianarana ny mpianatra, na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana:
BEPC- Bac (Ecole Professionnelle): 50 000 ariary/isam-bolana
2- Fametrahana ny karama na ho an'ny Service National, na ho an'ny mpiasam-panjakana, na ny mpampianatra, na ny privé:
- Ho an'ny Service national sy ny Privé:
Ny manana Bac+3 miakatra: 1 000 000 ariary isam-bolana;
Ny manana Bac - Bac+3: 500 000 ariary isam-bolana;
Ny latsaky ny Bac mandray 200 000 ariary.
Misy amboniny arakaraky ny diplôma sy ny andraikitra tazonina.
Ho an'ny privé dia ny Fanjakana no ameno ny efa omen'ny mpampiasa.
- Ho an'ny Mpiasam-panjakana sy ny mpampianatra
Miampy 10%, mahazo trano, ary hiantohana tanteraka ny fahasalamana na pubic na privé.
Misy vola amboniny isaky ny diploma, ancienneté, ary ny andraikitra tazonina.
Ny mpampianatra eny amin'ny Oniversité dia tafiditra mitovy amin'ny an'ny fanjakana.
Ny mpampianatra eny amin'ny privé, dia ny fanjakana no ameno ny efa omen'ny sekoly privé iasany.
3- Ireo mpanabe, mpiandraikitra tanora na fikambana matihanina, ireo mpitondra fivavahana:
Mahazo karama mitovy amin'ny Service National, torak'izay ihany koa ireo mikarakara tokatrano. Misy fotoana kosa angatahana amin'izy ireo hanaovany asam-piarahamonina izay akaiky azy.
4- Ireo Mpamboly, na ireo mpiompy, na ireo mpanjono sy mpanao asa tanana:
Mahazo karama isam-bolana, ankoatran'ny fanampiana azy amin'ny asa izay ataony, ary mamerina ny 2/3 n'ny karama noraisiny izy rehefa miakatra ny vokatra. Misy fampihofanana sy fanaraha-maso miaraka amin'izany.
5 - Ireo olona manana kilema
Omena fianarana sy asa izay sahaza azy ireo.
Ny Sainam-pirenena sy ny ankanjon'ny Service national ary ny Foloalindahy dia izy ireo no hisahana azy.
Iantohan'ny fanjakana tanteraka ireo manana kilema 75%. Iantohana ihany koa ny fitaovana ilain'izy ireo.
6- Misakafo sy madio ny rehetra:
Mahazo vary 150Kg, rano 15m3, éthanol 30litres/isam-bolana, isan-tokantrano, atao ao anatin'ilay Carte électronique asolo ny vola ny rehetra.
Mahazo Plaque solaire isan-tokantrano, averina 15 000 Ariary isam-bolana, mandritra ny 10 taona.
Mahazo tany 1000m² isan'olona.
7- Mahazo fahasalamana avokoa ny rehetra:
Misoratra OSTIE na OSIE na izay mifandraika amin'izay ny rehetra, ary hiantohana ny fahasalamana.
Hakana 1% ny karama ary ny fanjakana sy ny mpampiasa no mandoa ny (3+2)%, ka ny 3% ho an'ny fahasalamana ary ny 2% ho an'ny fanofanana sy ny fampianarana.
Ho raisin'ny fanjakana antanana tanteraka ny fanafohanana ireny aretina tsy tokony ho hisy intsony ireny, ny tazo, ny tuberculose, habokana, polio.
Ho raisina antanana tanteraka ireo mararin'ny cancer, na ny dépistage, na ny fitsaboana, ny diabète, aty sy voa (foie, rein), SIDA, sy ireny aretina mavesatra fitsaboana ireny.
8- Tsy fiankianan-doha amin'ny any ivelany:
Ho trandrahantsika ny harenantsika, na ny pétrole na ny volamena, na ny vatosoa samihafa, ny bois de rose sy ireo hazo lafo vidy, misy no ho kajiana ho an'ny tontolo iainana, misy kosa no entina ampandrosoana ny faritra
9- Fampandrosoana ny Faritra
Miainga any amin'ny Faritra ny fampandrosoana
Ho tsinjaraina 3 lehibe ny Faritra, avaratra, afovoany ary atsimo.
Toy izao ny fitsinjarana ny tetibola rehetra na ny fizarana ny hetra rehetra
Toy izao ny tetibola tantanan'ny tompon'andraikitra:
* Fokontany (20 000 isa): 50% n'ny tetibola (625 millions ariary isan-taona - 3,125 milliards fmg/Fokontany misy olona 1 000, ahitana 200 tafo)
10- Firafitry ny Fanjakana:
- Fohanana ny Sénat na ny antenimieran-doholona, fohanana ny primature, ferana 60 ny isan'ny solombavambahoaka (20 iskay ny Faritra 3), ferana 15 ny isan'ny ministère.
Ahena avokoa ny karama sy ny teti-bola. Samy miantoka ny fiainany, ka tsy misy carburant, na trano, na gaz, na Jirama, na mpanampy, na garde corps.
- Fifaninana avokoa ny fidirana Directeur.
Ny DG, fifaninana misokatra amin'ny olona ivelan'ny sampan-draharaha.
Ny Directeur sy ny Chef de service kosa, ny avy ao anatiny ihany no mifaninana.
Raisina toy ny mpiasam-panjakana, ka dia tsy maharitra amin'ny toerana iray dia mifindra.
Mahazo trano toy ny mpiasam-panjakana rehetra.
- Apetraka ny Mosoivoho any aminireo Firenena ilana fifanakalozana ara-barotra sy teknolojia. Tsy maintsy Malagasy avokoa na ny Ambassadeur na ny Consul.
* Mahazo mifidy avokoa.
* Amoraina ny fikarakara ireo taratasy rehetra ilainy, sorampiankohonana, pasiporo, karapanondro...
* Antsoina izy ireo hifanampy amin'ireo manampahaizana sy manana traik'efa eto an-toerana.
* Misy Banky Malagasy azon'ny Malagasy monina any ivelany ampiasana vola
* Hisy fitaterana faobe ho an'ireo izay hody nefa noho ny antony maro, ka tsy afaka mody.
Tsy lany andro amin'ny resaka rafitra isika, fa Assemblée Constituante, izay ahitana solotena isam-paritra, olobe, Ampanjaka, Sojabe, manampahaizana, mpitondra fivavahana, fikambanam-piarahamonina no ametraka ny Lalampanorenana sy ny fandaminana ny resaka toe-karena, sosialy, fitsarana, kolotsaina
Tsy ekena ny tsy maty manota, tsy maintsy manonitra ireo vola tsy azy na izay nangalariny ireo rehetra voakasik'izany.
Ampanginina mandritra ny taona vitsivitsy ny antoko politika rehetra, mila mifantoka miaraka amin'ny fampandrosoana sy ny Fahaleovantenam-pirenena.
Malalaka kosa ny fanehoan-kevitra sy ny haino aman-jery.
11- Ny Foloalindahy:
Omena ny toerany manokana ny Tafika. Mila fehezina ny ranomasim-be Indianina, sy ny faritra Canal de Madagascar (Canal de Mozambique), ao anatin'izany ireo Nosy malagasy.
Omena fitaovana hari-fomba sy fiofanana ny Foloalindahy, sambo, fiaramanidina aingam-pandeha, ankoatran'ny fiara sy hélicoptère.
Vatsiana fitaovana fiarovana toy ny gilet par balle, ary ho hari-fomba ny basy sy ny fitaovam-piadiana.
Mody andakazery avokoa ny Foloalindahy, fa tsy misy misahana ny asa sivily. Saziana mafy ny mpanao kolikoly.
Mitovy avokoa ny karaman'ny mpiasam-panjakana arakaraky ny fahaizana, andraikitra ary grady.
Avaozina tanteraka ho moderina ny lakazery rehetra, hisy ny trano hipetrahan'ny miaramila na Zandary na Polisy rehetra. Jerena manokana ireo vady amanjanaky ny Foloalindahy, indrindra ireo mamita iraka, sy ireo fianakavian'ny Mpitandro ny filaminana namoy ny vadiny izay maty am-perin'asa.
Mipetraka hatrany ny fizokiana eo amin'ny Foloalindahy amin'ny asa aman'andraikitra raisina.
12- Ny tanora, ny kolotsaina, fanatanjahan-tena
Ny sehatry ny tanora no tena hisy ny ezaka rehetra, ankoatran'ny fanomezana fiofanana, fampianarana, asa, dia hsy fotodrafitrasa goavana isam-paritra ananganana Université, Centre complexe sportif, centre sportif isaky ny Fokontany.
Fifanakalozana ara-panatanjahantena sy ara-kolotsaina.
13- Ireo Zoky ray amandreny, be antitra sy misotro ronono
- Hisy fitsinjovana azy ireo manokana, mba ananany fahaleovan-tena hatrany, na fanampiana manokana ara-pitsaboana na toerana hipetrahana miaraka, na fanampiana manokana ireo mitaiza antitra.
- Ho raisiny mivantana amin'ny carte électronique ny pension, na ny fanampiana azy ireo, tsy misy filaharana intsony. Azo atao en ligne avokoa ireo kojakojan-taratasy ilainy.
- Maimaimpoana ny saram-pitaterana fiarakodia ho azy ireo eo amin'ny manodidina hipetrahany, ary hisy 25-50% kosa ho an'ny Zotra nasionaly sy ny fiaramanidiny. Mahazo mitsidika mamaimpoana ny fianakaviany eto Madagasikara izy indray isan-taona, hisy fihenam-bidy 25-50% amin'izany ny hotely andray azy ireny.
- Ny Pension dia kajiana amin'ny asa rehetra natao, ahazo ny anjarany ihany koa ireo mpamboly sy mpiompy ary mpanao asa tanana sy manao asa tena.
- 75% tamin'ny salan'isan-karama (salaire moyen) ny pension ho an'ny mpiasa privé nahafeno taona niasana, raisina isam-bolana fa tsy isan-telovolana intsony. Ary 80% ny an'ny mpiasam-panjakana, isam-bolana ihany koa.
- 60 taona no afaka mandeha misotro ronona ny mpiasa iray. Mandeha aloha, 55 taona, kosa ireo manana statut manokana. Misy site internet ahafahana mahita ny pension horasina, ka raha tapa-kevitra andeha aloha, dia iny no raisina.
14- Fananan-tany, nationalité:
- Mahazo tany 1000m² isan'olona ny Malagasy rehetra.
- Tsy amidy amin'ny vahiny ny Tany, ary fohanana ny bail emphitéotique, tsy maintsy miara-miasa amin'ny Malagasy ny vahiny ampiasa tany.
- Averina amin'ny Malagasy ny tanin'ny Colon rehetra.
- Alaina ny Nosy Malagasy, sokafana ny fifampiresahana ara-diplomatika amin'ny Frantsa, Amerikanina, Sinoa, Rosianina.
Hiatrana kosa ny Foloalindahy amin'ny fiarovana izany Nositsika izany.
- Ireo rehetra teraka na nipetraka teto Madagasikara talohan'ny 1960 dia mahazo nationalité Malagasy avokoa, tsy jerena anarana malagasy na tsia, toy izany koa ny taranany. Mahazo nationalité Malagasy ihany koa ireo rehetra teraka eto Madagasikara (Droit de sang, et droit de sol). Tsy ekena kosa ny fitokatokana ara-piaviana na ara-pomba sy ara-poko (communautarisme)
15- Fandraisana anjara ara-bola na ara-pitaovana avy amintsika:
Koa mandraisa anjara ary na ara-bola na ara-pitaovana, na olon-tsotra, na orin'asa, na mpandraharaha, ho entintsika mampandresy ny hevitra tiantsika ajoro eto amin'ny Firenena.
Ho an'ireo izay tsy afaka manao izany, dia zava-dehibe na message ihany aza, na vavaka avy amintsika.
Ajoroy isaky ny Fokontany misy antsika, na any amin'ny sehatra misy antsika ny Komity Mpanohana Vitatsika. Aza miandry baiko, fa mandraisa andraikitra avy hatrany.
Vos dons et participations:
Orange Money: 032 22 667 77
Airtel Money : 033 41 877 62
Mvola : 034 45 999 66
Ho antsika mipetraka any ivelany, dia azo alefa Paypal na Western Union ihany koa, na amin'ny Carte bleue.
Afaka mandefa message isika izay mila fanazavana manokana.